Google's Antitrust Suit iHarbinger yeMvura Yakashata yeApple IDFA Shanduko | Martech Zone
Nepo nguva yakareba ichiuya, mhosva yeDoJ yekuzvidzivirira pamusoro peGoogle yasvika panguva yakakosha yeiyo ad tech indasitiri, sezvo vashambadziri vari kutsigira kuremara kwaApple Chitupa cheVashambadziri (IDFA) shanduko. Uye neApple zvakare ichipomedzerwa mushumo wemapeji 449 uchangoburwa kubva kuUS House of Representatives yekushandisa zvisizvo simba rayo rekuzvitonga, Tim Cook anofanira kunge ari kuyera nhanho dzake dzinotevera zvakanyatsonaka.
Kugona kuomerera kweApple pane vanoshambadzira kungaite iyo inotevera tech hofori kuendeswa? Ndiwo mubvunzo iwo madhora makumi masere emadhora ekushambadzira maindasitiri parizvino ari kufungisisa.
Kubva pari zvino, Apple Inc. inoita kunge yakanamatira pakati pebwe uye nenzvimbo yakaoma: yakashandisa mamirioni kuzviisa pachezvayo sekambani yekushandisa-yakavanzika centric, uye mukugadzira chinotsiva IDFA, rave riri dombo repakona remunhu kushambadzira kwedhijitari kwemakore. Panguva imwecheteyo, kubvisa IDFA pachinzvimbo chayo yakavharika-yakavharwa -SkAdNetwork, kwaizoita Apple mukwikwidzi angangoita mukana weantitrust sutu.
Nekudaro, nekumisikidzwa kwazvino kweIDFA shanduko kutanga kwa2021 Apple ichine nguva yekuchinja nzira yazvino uye kudzivirira kutevera tsoka dzeGoogle. Zvingave zvine hungwaru kuti tech hofori icherechedze nyaya yeGoogle uye ichengete IDFA kana kuvandudza SkAdNetwork nenzira isingaite kuti vashambadziri vanyatso tsamira pane yavo yakasarudzika mushandisi data.
Mune fomu yazvino, Yakataurwa naApple SkAdNetwork inotaridzika senge yakatokura kuenda kunotora monopoly pane zvakaitwa neGoogle muindasitiri yekutsvaga. Kunyangwe Google iri yekupedzisira mutambi mukurusa mumunda wayo, zvirinani, kune dzimwe nzira dzekutsvaga dzevatengi dzinogona kushandisa zvakasununguka. IDFA, kune rimwe divi, inokanganisa iyo ecosystem yese yevanoshambadzira, vashambadziri, vatengi data vanopa, uye vanogadzira maapps vasina sarudzo asi kutamba bhora neApple.
Haisi nguva yekutanga Apple kushandisa ruoko rwayo rwepamusoro kumanikidza musika kutevedzera. Mumwedzi ichangopfuura, vagadziri veapp vanga vachisundira kumashure kurwisa kukuru kweApple 30% kubva kune zvese zvekutengesa zvakaitwa muzvitoro zveapp - chipingamupinyi chikuru chekuita mari. Makambani akabudirira zvakanyanya seEpic Mitambo anotova nekwaniso yekuita zvehondo zviri pamutemo neiyo tech hofori. Asi kunyangwe Epic kusvika parizvino haisati yabudirira kumanikidza ruoko rwaApple.
Padanho razvino, zvakadaro, kuenderera kweantitrust kuenderera kunotora nguva yakareba kuti iite shanduko ine musoro kune yekushambadzira indasitiri. Vaparidzi vanonetsekana nekuti mhosva inopokana neGoogle inotarisa zvakanyanya pazvibvumirano zvekuparadzira zvekambani zvinoita kuti ive yekutsvaga injini asi ichitadza kugadzirisa kunetseka kwavo kukuru nezve maitiro ekambani mukushambadzira kwepamhepo.
Zvinoenderana neongororo ichangobva kuitwa nevakuru vekukwikwidza kuUK, masendi makumi mashanu nemasere chete emadhora ega ega anoshandiswa kushambadza rinosvika kumuparidzi. Masendi makumi mana nesere akasara anongoita mhute yedhijitari. Zviripachena, pane chikonzero chekuti vaparidzi vashungurudzike nezvazvo. Nyaya yeDJJ inojekesa chokwadi chakashata cheindasitiri yedu:
Uye kufambisa kunze kwemanyonganiso atakagadzira inova nzira yakaoma, inononoka, uye inonetesa. Kunyange iyo DOJ yakatora nhanho dzekutanga neGoogle, zvirokwazvo ine Apple mumaonero ayo zvakare. Kana Apple ichida kuve kurudyi kwenhoroondo iyi mukugadzira, hofori inofanirwa kutanga kufunga nezve kuti ingashanda sei neayo ad tech indasitiri pane kuyedza kuitonga.